Liverpool Oo Markii 6-aad Ku Guulaystay Champions League %
Liverpool Oo Markii 6-aad Ku Guulaystay Champions League
By Ramzi Yare	 On Jun 2, 2019
Kooxaha Liverpool iyo Tottenham ayaa nasiinada ku aaday hal gool oo ay laheyd Liverpool , waxa uuna kulankaan ahaaa mid adag.
Goolka Liverpool ayaa yimid biloowga ciyaarata waxaana rigoore loo dhigay gool u badalay Mohamed Salah ka dib markii kubad uu Mane gacanta usaaray ku taabtay ciyaaryahanka Tottenham ee Sissoko .
Inkastoo Totetnham goolkaas looga naxsaday hadana waxa ay ciyaarayeen kubad kalsooni leh kamana muuqan wax qa qal oo waliba si xoriyad leh ayay u ciyaarayeen.
Liverpool ka dib goolkaas waxa ay isku dayayeen in mid labaad keenaan waxa ayna halayeen fursado badan oo koornooyin ah
Tottenham dhanka weerarka kaliya waxaa ka muuqday Son kaasi oo dhowr jeer fursado goolal loo badali karo helayay balse sidii la rabay uma uusan maamuleyn kubadda .
Tottenham wax ay inta badan ku tiirsanayeen kudabada rogaal celiska ah xilli Liverpool dhanka daafcaaan ahaayeen kuwo aad u wacan .
Balse guud ahaan marka la eego qiimaha finalka kulankaan ma aheyn mid aad u xamaasad badan waxa ayna Liverpool daqiiqaddii 38-aad ku sigteen gool labaad ka dib markii uu Robertson ka toogtay goosha Tottenham balse goolhayaha ayaa bad-baadiyay
Biloowgii qeybta labaad , Liverpool dhowr kubad ayay ku laadeen goosha Tottenham balse daafaca ayaa hor taagnaa waxa ayna Tottenham sameynayeen dhaq dhaqaaq wacan waxaana markaan la arkayay Harry Kane .
Tottenham qeybta labaad kubadda waa ay soo gaarsiinayeen goosha Liverpool balse natiijo ma laheyn waxa ayna Liverpol badalkooda ugu horeeyay sameeyeen daqiiqaddii 59-aad waxa ayna soo giliyeen Divock Origi oo loo badalay Firminho.
Liverpool si dhaq dhaqaaqooda wax uga badalaan waxa ay sameeyeen badal labaad oo farsamo ah waxa ayna soo gilyeen Milner daqiiqaddii 62-aad iyadoo loo badalay Georginio Wijnaldum halka Tottenham ay sameeyeen badalkooda ugu horeeyay daqiiqadii 66-waxa ayna sareen Winks iyadoo la soo giliyay Moura .
Si guud marka loo eego ciyaarta waxa ayna aheyd mid qaboow inkastoo Totetnham mar waliba heerka kubad haysashadooda ay ku fiicneed xili daqiiqadii 73-aad Deli Ali ku dhawaaday in shabaqa uu dhigo kubad cajiib ah balse goolhayaha ayaa ku raaxeystay .
Tottenham dhamaadkii dhaq dhaqaaq sareeya ayay wadeen waxaana daqiiqaddii 79-aad kubad laad aheyd ee Son ku laaday goosha Liverpool waxaa bad baadiyay goolhayaha ka dib waxaa ku celiyay Moura hadana wuu bad baadiyay
Daqiiqaddii 85-aad Christian Eriksen ayaa laga bad baadiyay kubad free Kick aheyd waxaana si cajiib ah koorno ugu saaray goolhayaha Tottenham waxaana xusid mudan in Tiotetnham %62 ay kubadda haysteen
Nsiib xumo , xilli xaalka sidaas ahaa Tottenham bar bar dhac u dhawaayeen ayay Liverpool waxa ay heleen kubad koorno ah taasi oo aagga goosha Tottenahm ku laalabatay waxaana markii dambe helay Divock Origi kaasi oo si cajiib ah shabaqa u dhigay daqiiqadii 88-aad . waxa ayan Tottenham ka dib 5 daqiiqo oo lagu daray ciyaarta isku dayayeen in ay gool keenaan balse waxaa loogu dhameeyay laabdaas gool ee ay Champion-ka ku qaaday Liverpool.
RIKOORADII Xalay laga diiwan galiyay kulankii kooxaha Liverpool iyo Tottenham Hotspur